Emeelarị ka mbipụta Fedora 32 beta na ndị a bụ mgbanwe ya | Site na Linux
Emeelarị ka mbipụta Fedora 32 beta na ndị a bụ mgbanwe ya
Fedora ysmụ okorobịa na nso nso a mara ọkwa ntọhapụ nke ụdị beta nke Fedora 32, Na nke a kara akara na ule ikpeazu akara, nke a na-ahapụ naanị njehie dị oke egwu. A ga-ewepụta nsụgharị nke nsụgharị anụ ahụ na njedebe nke Eprel.
N'ime mgbanwe ndị kachasị ama Na ụdị beta nke a tọhapụrụ nke Fedora 32, ekwuru ya na na-ewuli maka ebe ọrụ, usoro ndabereEarlyoom ịzaghachi n'isi na-adịghị na ebe nchekwa na usoro.
Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke ebe nchekwa dị obere karịa uru akọwapụtara, mgbe ahụ dabere na nha nchekwa ahụ fọdụrụ A ga-eziga sigterm (enweghị nchekwa na-erughị 10%) ma ọ bụ Sigkill (<5%) karịa site n'ike usoro nke na-erepị ihe kachasị ebe nchekwa ga-akwụsị.
Mgbanwe ọzọ dị mkpa bụ na nhazi oge ndabara nke bu "Oge nkwụsị", nke na-amalite ọrụ fstrim.service otu ugboro n'izu iji mezuo iwu "/ usr / sbin / fstrim –fstab –verbose –quiet", nke na-ezipu ozi gbasara blocks ndị a na-ejighị ya na faịlụ faịlụ agbakwunyere na nchekwa nchekwa LVM na-agbasawanye na nchekwa.
Usoro a na-eyi akwa na akwa na SSD na NVMe draịva ma na-abawanye arụmọrụ nke nhicha mkpocha yana yana LVM na-eme ka ojiji nke enweghị ezi uche dị na ya site na ịkebe ohere nchekwa ("ihe dị mkpa") na ọdọ mmiri;
N'ihi na desktọọpụ gburugburu ebe obibi, anyị nwere ike ịhụ ọhụrụ version nke Gnome nke 3.36, nke ngwa dị iche pụtara iji jikwaa plugins maka Gnome Shell, na mgbakwunye na a haziri imewe nke nbanye na ihuenyo ịmeghe ihu, emeela ka ọtụtụ n'ime usoro okwu usoro a gbanwee, ọrụ nke ịmalite ngwa site na iji GPU pụrụ iche na sistemụ nwere ngwakọ ngwakọ.
Banyere nchupu nke ndụ bara uru nke A ga-ewepụ Python 2 si Fedora ngwugwu python2 na ngwugwu niile chọrọ Python 2 maka ịrụ ọrụ ya ma ọ bụ nzukọ ya. Maka ndị mmepe na ndị ọrụ chọrọ Python 2, a ga-enye ngwugwu python27 dị iche iche nke a ga-ahazi n'ụdị ụdị niile (enweghị obere ngwugwu) ma ọ bụghị ka ejiri ya dabere na ya.
Site na ndabara, a na-eji ngwugwu iptables-nft mee ihe kama iptables-kpụrụ. Ọ na-enye usoro nke ihe eji arụ ọrụ iji hụ na ndakọrịta na iptables nwere otu okwu ahịrị iwu mana sụgharịa iwu ndị na-apụta na nf_tables bytecode;
Buildlọ ahụ jiri GCC 10, Na mgbakwunye, etinyere ụdị nke ọtụtụ nchịkọta gụnyere Glibc 2.31, Binutils 2.33, LLVM 10-rc, Python 3.8, Ruby 2.7, Gaa 1.14, MariaDB 10.4, Mono 6.6, PostgreSQL 12, PHP 7.4.
E tinyela koodu Iji nchịkọta njikwa DNF iziga ozi ndị dị mkpa maka nyocha ka mma nke nkesa onye ọrụ isi.
Kama ibugharị ebugharị nke UUID pụrụ iche, atụmatụ dị mfe dabere na oge ntinye oge na agbanwe agbanwe yana data na ije na ụdị sistemụ arụmọrụ etinyere.
A ga-emegharị counter "countme" na "0" mgbe ọkpụkpọ nkesa mbụ gara nke ọma na mgbe ụbọchị asaa ọ ga-amalite ịbawanye kwa izu, na-enye gị ohere ịtụle oge ole etinyere ụdị ahụ ejiri. Ọ bụrụ na ịchọrọ, onye ọrụ nwere ike iwepu izipu ozi a.
Na onye ntụgharị okwu Python a chịkọtara ya na nhọrọ "-fno-semantic-interposition", nke iji ya nwale gosipụtara mmụba arụmọrụ site na 5% ruo 27%;
N'ikpeazụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịnwale ụdị beta nke nkesa a, ịnwere ike ibudata onyonyo sistemụ site na njikọ dị n'okpuru.
Nwere ike ịchekwa onyonyo sistemụ na Etcher.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Emeelarị ka mbipụta Fedora 32 beta na ndị a bụ mgbanwe ya
M gbalịrị ụdị beta ahụ. Nsogbu bụ na ọ na-ekokwasị, ma m IBM X3650 m3 na m Dell T3600. Mgbe ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma ihe niile na-agba oyi, mgbe ụfọdụ nke ahụ na-eme ozugbo ị banyere.
Microsoft weputara ozi banyere nzụta NPM ma mepee ya na GitHub